Eczema na ụmụaka | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Ihe kpatara atopic dermatitis
Ngụgụ obi ụtọ maka atopic dermatitis
Ọ na-ada, ị na-amị. Ọ na-adaghachi azụ, ị na-apịa ọbụna karị. Ruo mgbe akpatre, ihe niile dị njọ na ọbara. Ihe siri ike maka ndị toworo eto, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ime ụmụaka: kwụsị ịchachapụta oge mgbe ọmarịcha ihe a na-achọpụta na mgbatị na-amalite.
Ma gịnị bụ eczema atopic?
N'ihe gbasara 15% nke ụmụaka nile, ọrịa a na-emetụta, ndị okenye na-abụkarị ndị nkịtị. N'okpuru ihe omimi - nke a na - akpọ eczema ecop - na - eme ka ihe na - agwụ ike, tinyere akpọrọ akpụ, nke dị oke.
Uzo esi eme ka umuaka noo
Ma ọrịa dị, ọ nwere ike ikpebi site na akpụkpọ ahụ. Ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala na njirimara 3 na 3 obere njirimara na-ezute, ọrịa dị mma. N'ezie, n'ọnọdụ ọ bụla, a ga-enweta ndụmọdụ nke ọkachamara ahụike!
Nchọpụta siri ike
Ụdị nkesa (ikpere, ikpere, olu, afọ)
Ọrịa ezinụlọ ezinụlọ (asthma, allergies, atopic dermatitis)
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ kama imegharị ọbara ọbara mgbe ọ gbasịrị ya
Izu oke gburugburu ọnụ
Ọ na-abanye site na ịsụ
Inweghi nkwekorita uwe
Dermatitis gburugburu nipples gburugburu
Onye ga-achọ iche echiche banyere oge niile banyere ọrịa niile nke ụwa a - karịa ụdị ọrịa niile a maara nke ọma - kpamkpam ka a ghọtakwuo ya. O di nwute n'ihi nhụjuanya nke otutu ndi mmadu abughi otua. N'adịghị ka ihe atụ, anụ ntutu anụ nke onye nwere ike ikwu "Nwa gị na-emekpa ịnyịnya"A ghaghị ịchọpụta ihe kpatara ya.
Otu na-ekwu okwu ebe a banyere ndị na-akpata ma na-emetụta ihe, nke nwere ike ime ka onye ahụ nwee nsogbu. Iji mesoo ọrịa ahụ, ọ gaghị enyere aka belata mgbaàmà ahụ, mana nke mbụ, a ghaghị idozi nsogbu ndị ahụ.
Ma ndepụta nke ihe kpatara ya nwere ogologo na mgbagwoju anya:
Nchegbu ma ọ bụ nchekasị uche na ahụ (dịka ịda mbà n'obi)
Mmekorita nke ụdị ọ bụla (dịka ntutu anụ, pollen, ájá ụlọ ma ọ bụ ihe oriri na-edozi ahụ)
ọnọdụ ihu igwe (dịka oké oyi ma ọ bụ oké ọkọchị)
Mmetụta gburugburu ebe obibi dị ka ikuku na-ekpo ọkụ
Ncha na-ezighị ezi nke akpụkpọ ahụ
Mmetụta ọjọọ dị ka afọ ime
Ọrịa nke eriri afọ
Ị na-ahụ na ndabere nke ihe atụ ole na ole: ihe ndị nwere ike ime bụ ọtụtụ. Enyemaka ebe a bụ "Disease edetuIdu. Jiri nlezianya dee ihe ị meworo, rie ma ọ bụ chee n'oge ahụ.
Ihe ngosi: A "ọrịa diary" nwere ike inye aka na ọrịa ndị ọzọ dịka otutu. Dabere na nke a, ọ ga-ekwe omume chọpụta ihe kpatara ya ebe a. Ihe atụ nke ihe mere n'ezie bụ: Ka anyị kpọọ onye anyị bụ Mario. Mario adịghị ata ahụhụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ, ma na mberede, ha nọ ebe ahụ. Ha ahapụghị. Ihe ọ bụla pụtara na Mario gbalịrị, ma ọ bụ ebe nne nna ochie na-agwọ ọrịa, ihe ndị a na-erekarị n'ụlọ ahịa ọgwụ ma ọ bụ ego pụrụ iche site na ụlọ ọgwụ, ọ dịghị ihe nyeere ya aka.
N'oge ụfọdụ, Mario malitere ịde akwụkwọ, ihe ọ na-eri mgbe, ọrụ ndị ọ gara mgbe ọ gasịrị nakwa na. Mgbe o mesịrị chọpụta ya, ọ chọpụtara na ya na-enweta nri sandwiches ya site na onye na-eme achịcha ọhụrụ kwa ụtụtụ ruo ọtụtụ ọnwa. N'ikpeazụ, Mario zere onye na-eme achịcha n'elere ikpe maka izu 2 ... ma gịnị kpatara ya? N'aka aka nri, pimples ahụ laghachiri ruo mgbe ha mesịrị kpamkpam. Onye na-eme achịcha ga-eji ụfọdụ ingredient na aru Mario na-enwe nfụkasị ahụ, n'ihi ya kwa, a na-emepụta acne.
Dị ka a kọwuru, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịkwụsị ihe kpatara ya iji merie ọrịa ahụ nke ọma. Ụmụaka na-arịa ọrịa na-agbagha mgbe nile, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ nwa nke ha, ọ na-etikwa mkpu ma na-apịa ya. Ka ọ dịkarịrị ala, anyị ejikọtala 5 Atụmatụ nke kwesịrị inye aka na-emegharị ya, yana ihe ọkụ ọkụ:
Dị ka ihe nchịkwa dị ka ọ na-ada: egbula ya! Ọ bụrụgodị na ọ bụ n'ihi na ndị okenye na-ama siri ike na yiri ka ọ fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume maka ụmụaka, ma na ọkọ aka mgbu naanị maka a nnọọ mkpirikpi oge, ma mgbe ahụ na-abịa azụ na a nnukwu boomerang mmetụta. Ezigbo oke okirikiri!
Ihe ngosi: Iji gbochie nsụgharị na-achọghị, dịka ọmụmaatụ, n'abalị mgbe ụra na-ehi ụra, ọ bara uru ịkpụ obere mkpịsị aka na -ewe akwa globe.
Black tii kechie
Mee ka nwa tii na-ekpuchi ya ma tinye ha na ebe ndị emetụtara. Site tannins, a na-echebe oyi akwa mepụtara a akpụkpọ tụfuru obere mmiri (na-echeta, akọrọ akpụkpọ!) Back na itching ya.
Achịcha mgbe nile
Ma kacha mma ma ọ bụ mmanụ nkịtị. Nke ọma ruru eru ebe a dị ka ndị Moroccan argan mmanụ. Argan mmanụ bụ a eke, vegan mmanụ na a elu ọdịnaya nke eke antioxidants na vitamin E, nke aka na itching na-enye ihe dị mkpa mmiri nke anụ. Ihe ndi ozo banyere argan oil ...
Dị ka edererịrị n'elu nchekasị nwere ike ịbụ ihe kpatara ya. N'okwu a, mmeme ntụrụndụ nwere ike inyere aka mee ka ọdịmma gị dịkwuo mma ma, dị ka a rụpụtara, nyelata ya.
Njikere kwesịrị ekwesị & akọrọ
Mgbe igosiputa mmiri, emela ka mmiri ahụ dị ọkụ, n'ihi na nke a na-ekpochapụ akpụkpọ ahụ. Mgbe ahụ, kpoo akpụkpọ ahụ kama iji akpụkpọ anụ, dab na ákwà nhicha ahụ, iji gbochie nje na-enweghị isi na akpụkpọ ahụ. Ọ dị mkpa ebe a ka akpụkpọ ahụ reechaa na ude.
Agbanwe omume na mmiri ozuzo | ụmụaka
Ịgụ ihe bara uru na-enyere aka na ọrụ mgbakọ na mwepụ
Mepụta cress isi na umu onwe gị